फिट्नेस पुल पार्टी - विकेन्ड - साप्ताहिक
आज शनिबार बेलुकी के गर्दै हुनुहुन्छ ? शनिबार, बिदाको दिन भनेर अल्छी मान्दै घरमै बसिरहनु हुन्छ कि ? शरीरलाई स्वस्थ एवं फुर्तिलो बनाउन बिदाको साँझ सदुपयोग गर्नुहुन्छ ? बिदाअनुसार पार्टी पनि हुने र फिटनेस पनि । नेक्स्ट स्टेप फिट्नेसले आज शनिबार साँझ फोर्थ एनुअल अक्वा फिट्नेस एन्ड पुल पार्टीको आयोजना गरेको छ । पौडी पोखरीमा डुब्दै जुम्बा डान्स एवं खानपिनको रमाइलोमा सहभागी हुने कि ?
मिति : साउन २१ गते, शनिबार स्थान : उडल्यान्ड कम्प्लेस, दरबारमार्ग
समय : ३ बजे साथमा : डिनर प्रवेश शुल्क : प्रतिव्यक्ति रु. दुई हजार
दरका बारेमा जानकारी
ब्युटिफुल कपल इन पार्टी
दसैंका रमाइला कार्यक्रम आश्विन २५, २०७५
इबिजामा फ्रान्सेली डिजे मिस गुल आश्विन २०, २०७५
अक्सिजनमा कमेडी नाइट आश्विन २०, २०७५
दसैं कार्निभल सिजन–३ आश्विन १९, २०७५
आज पोखरामा नवीन के भट्टराई आश्विन १९, २०७५
विकेण्ड फेसनमा आर्म रेस्लिङ आश्विन १९, २०७५
काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका चकलेट आश्विन १५, २०७५
काठमाडौं मलमा यार्चा जाभा आश्विन १४, २०७५
टर्टल लाउन्जमा राजु लामा आश्विन १२, २०७५
नेपाल ल्याटिन डान्स फियस्टा आश्विन १२, २०७५